Milina fanariana fantsom-panafihana manokana - Vaovao - Qingdao Puhua Heavy Industrial Machinary Co., Ltd.
Milina fanariana fantsom-basy manokana
Ny milina fanamafisam-peo mitifitra karazana fantsom-panafody ho an'ny fanariana dia mety indrindra amin'ny fanadiovana fasika, fanesorana ny harafesina ary fanamafisana ny fanamorana ny fantsom-pako ary ny faritra fanamafisam-peo, indrindra ho an'ny fanadiovana ireo faritra manify sy mora mipoaka izay mety tsy hifandona. Ny milina fanamafisam-peo fitifirana manokana ho an'ny fanariana dia mandray ny rafitra tsy misy lavaka, izay tsy vitan'ny hoe mamonjy ny vidin'ny fananganana sy ny fotoana iorenan'ny lavaka ho an'ny mpampiasa, fa mamaha ihany koa ny olan'ny harafesina sy ny famaohana ny fasika voatifitra ao anaty fiompiana vokatry ny fitahirizana rano any an-davaka ao Sina atsimo. Ny milina fampifangaroana mitifitra avo lenta dia ampiasaina amin'ny milina fanapoahana karazana hook ho an'ny casting, izay afaka manatsara ny vokatra fanadiovana ary mahazo kalitao fanadiovana mahafa-po.
Ny milina fantsom-panafihana mitifitra voatavo milina nozaraina ho tokana sy faratra hook. Ny fantsom-pohy manokana dia nitifitra milina fantsom-by tamin'ny fantsom-pandriana roa ary niditra ilay efitrano fanadiovana nanapoaka nifandimby. Ny projectiles 0.2 ~ 0.8 dia natsipy tany ambonin'ny sangan'asa tamin'ny alàlan'ny blaster notifirina mba hahatonga ny velaran'ilay sangan'asa hahatratra henjana iray, hahatonga ny workpiece ho tsara tarehy, na hanova ny adin-tsoratry ny workpiece hanatsarana ny fiainam-panompoana. Ny milina fantsom-pitrandrahana fantsom-panafody manokana ho an'ny fanariana dia be mpampiasa amin'ny fanadiovana ny tany na fanamafisana ny fitsaboana fanodinana kely sy salantsalany amin'ny fanariana, fananganana, indostrian'ny simika, motera, fitaovana milina ary indostria hafa.
Ny milina fantsom-panafarana mitifitra karazana fantsom-panafody dia fitaovana fanadiovana karazana hook, izay misy ny efitrano fitifirana, fanisarana, fisarahana, mpanondrana visy, fivoriambe fanapoahana tifitra roa, rafitra fanaraha-maso tifitra, lalan-kely an-tongotra, rafitra hook, fitaovana fihodinana, fototra , rafitra fanesorana vovoka sy sampan-draharaha mifehy ny herinaratra.
Teo aloha:Inona no fantatrao momba ny milina famaohana tifitra hook
Manaraka:Fomba entina manangona vovoka ao amin'ny efitrano fipoahana fasika